Kheladi - सालाहको त्यो गोल, चर्चा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको
सालाहको त्यो गोल, चर्चा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको
असोज २२, २०७८ २०:०७
इङ्लिस प्रिमियर लिग (इपिएल) को नयाँ सिजन सुरुआती चरणमा छ । सात खेल सकिँदा पहिलो दुई स्थानमा चेल्सी र लिभरपुल छन् । यी दुईलाई म्यानचेस्टर सहरका दुई टिमले पछ्याइरहेका छन् ।
प्रिमियर लिगको अंकतालिका खासै आश्चर्यचकित बनाउने खाले छैन । स्ट्राइकर मोहम्मद सालाहले लोभलाग्दो सुरुआत गरे पनि त्यसले कमैलाई मात्र आश्चर्यमा पारेको छ ।
लिभरपुलका फरवार्ड सालाहले लिगका ७ खेलमा ६ गोल गरिसकेका छन् । गत सिजन उनले लिगमा २२ गोल गरेका थिए । यसपालि उनले गत सिजनभन्दा धेरै गोल गर्नसक्ने सम्भावना विकसित भइरहेछ । अहिलेको उनको लयले यही बताउँछ । यद्यपि उनको लयबाटै फुटबल समर्थक खासै अचम्मित भने भएका छैनन् । किनभने उनको खेल कौशल र स्तरबारे सबै जानकार छन् ।
एउटा तथ्य के हो भने सालाह ‘ग्लोबल स्टार’ बनिसकेका छन् । ‘लिभरपुल लेजेन्ड’का रूपमा उनी स्थापित भइसकेका छन् । लिभरपुलबाट उनले कस्तो खेल देखाउँदै आइरहेका छन् भन्ने तथ्य त म्यानचेस्टर सिटीविरुद्ध उनले गरेको गोलबाट पुनः एकपल्ट उजागर भएको छ । एनफिल्डमा भएको उक्त गोलको यतिबेला सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।
त्यो गोल गर्दा सालाहले सिटीका पाँच खेलाडीलाई बिट गरेका थिए । जोआओ क्यान्सेलो, फिल फोडेन, एमेरिक लापोर्ट अनि गोलरक्षक एडरसन ।
‘यो गोल अर्कै ग्रहबाट गरिएको हो,’ सालाहको गोलबारे ग्यारी नेभिलको टिप्पणी यस्तो थियो । उता लिभरपुलका प्रशिक्षक योर्गन क्लोपको प्रतिक्रिया थियो, ‘सालाहको गोललाई आउँदो ६० वर्षसम्म पनि याद गरिनेछ । विश्वका उत्कृष्ट फुटबलरले मात्र यस्तो गोल गर्न सक्छन् ।’
यहीबीच महत्वपूर्ण बहस छेडिएको छ सालाहबारे । उनको लयबारे । के वर्तमान लयका आधारमा सालाह विश्व फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन् त ? यो प्रश्न उब्जेको छ । सलाहले पछिल्ला ४-५ वर्षयता निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो सिजन उनी फरक उचाइमा पुग्ने अनुमान गरिँदै छ ।
‘यतिबेला सालाहभन्दा राम्रो कसैले पनि खेलिरहेका छैनन्,’ आइतबार लिभरपुलका पूर्वरक्षक जेमी क्यारागरले बिबिसी रेडियोसँग भनेका थिए ।
क्रिस सटनको भनाइ पनि उस्तै थियो । ‘हामीले सालाहलाई अहिले नै लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग तुलना गर्न आवश्यक छैन । तर हाल सालाहले मेसी र रोनाल्डोले भन्दा राम्रो खेलिरहेका छन्,’ सटनले भनेका थिए ।
सालाहले प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिगमा ९ गोल र ३ असिस्ट गरिसकेका छन् । रोनाल्डोको खातामा ५ गोल छ । अनि मेसीले पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) पुगेपछि एक गोलमात्र गर्न सकेका छन् ।
सालाहले सन् २०१७-१८ सिजनमा कुल ४४ गोल गरेका थिए । लिभरपुलसँगको पहिलो सिजनमै त्यस प्रकारको लय देखाएका सालाहले यसपालि पनि ४० वा त्यसभन्दा बढी गोल गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
सालाहलाई लिभरपुल इतिहासकै खतरनाक ‘गोल स्कोरर’मध्ये एक मान्न थालिएको छ । उनलाई रोजर हन्टसँग पनि तुलना गरिँदै छ । हुन त लिभरपुलमा सालाहको महत्व असाध्यै धेरै छ । सन् २०१७ मा इटालियन क्लब एएस रोमाबाट लिभरपुल पुगेका इजिप्टका सालाहले २ सय १२ खेलमा १ सय ३४ गोल गरिसकेका छन् । उनको नाममा ४६ असिस्ट पनि छ ।
पछिल्ला चार सिजनमा उनले क्रमशः ३१, २३, २७ र ४४ गोल गरेका थिए । यसबीचमा उनले दुई पटक गोल्डन बुट पनि जितिसकेका छन् । एक पटक पिएफए प्लेयर अफ दी एयरको ट्रफी जितेका थिए ।
उनले लिभरपुलको जर्सीमा प्रिमियर लिग, च्याम्पियन्स लिग, युरोपियन सुपर कप र क्लब विश्वकपको ट्रफी उचालेका छन् । गोल र असिस्टबाहेक सालाहको अर्को ठूलो गुण भनेको फिटनेस हो । चोटका कारण उनले लिभरपुलमा मात्र लिगका ७ खेल गुमाएका छन् ।
‘आर्येन रोबेन, फ्रान्क रिबेरी थिए, जसले विंग्सबाट स्ट्राइकरको भन्दा बढी गोल गर्थे । उनीहरूको स्थानमा अब सालाह आइपुगेका छन्,’ कुनै बेला सालाहसँग इटालियन क्लब फियोरेन्टिनामा सँगै खेलेका माइक रिचार्डसले भनेका छन् ।
सालाहकै गोलका कारण लिभरपुल फेरि एकपल्ट प्रिमियर लिग उपाधिको दाबेदार बनेको छ । हुन त लिभरपुलमा भर्जिल भान डाइक, एलिसन, साडियो माने जस्ता खेलाडी छन्, जसको महत्व उच्च छ । तर सालाह ‘डिफरेन्स मेकर’ हुन् ।
‘सालाहबिना लिभरपुल उपाधि दौडमा हुँदैनथ्यो, यो सत्य हो,’ रिचार्डस भन्छन् । गोल गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै सालाह लिभरपुलको सर्वाधिक महत्वपूर्ण खेलाडी बनेका होइनन् । जतिसुकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले उनी सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी साबित भएका हुन् ।
उनले यस सिजन कठिन प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध गोल गरेका छन् । भन्नैपर्दा चेल्सी र सिटीविरुद्ध । च्याम्पियन्स लिगमा एसी मिलान र एफसी पोर्टोविरुद्ध पनि उनले गोल गरेका थिए । लिभरपुलको इतिहासमा सबैभन्दा बढी युरोपियन गोल गर्नेमा सालाह स्टेभन जेरार्डभन्दा मात्रै पछाडि छन् ।
सालाहको प्रशंसा लिभरपुल समर्थकले मात्रै गर्ने गरेका छैनन् । प्रतिद्वन्द्वी क्लबहरूका पूर्वखेलाडीबाट समेत सालाहको प्रशंसा हुँदै आएको छ । यही सूचीमा छन्, म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्वरक्षक रियो फर्डिनान्ड । ‘सालाह असाधारण खेलाडी हुन् । उनी सजिलै गोल गर्छन् अनि सजिलै लिभरपुललाई जिताउँछन् । यस्तो लाग्छ उनले फुटबल खेललाई नै सजिलो खेल बनाइदिएका छन्,’ फर्डिनान्डले भनेका छन् ।
अब यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, विश्व फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्न सालाहलाई कसले रोक्न सक्छ त ? मेसी या रोनाल्डोले ? यी दुवै खेलाडीको लय सालाहको जस्तो बलियो देखिएको छैन । फेरि उनीहरू उमेरका हिसाबले आ-आफ्नो करियरको उत्तरार्धमा छन् ।
त्यसो भए सालाहको प्रतिद्वन्द्वी को त ? यसको जवाफमा केही खेलाडीको नाम आउन सक्छ । जस्तै, किलियन एमबाप्पे, रोबर्ट लेवान्डोस्की, इर्लिङ हल्यान्ड, करिम बेन्जेमा आदि ।
कुनै बेला सोचिएको थियो, एमबाप्पेले मेसी र रोनाल्डोको स्थान लिनेछन् । तर उनको खेल अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन, यो सिजन । यसपालि उनको खातामा ४ गोल र ५ असिस्ट छ । यो तथ्यांकको सहारामा एमबाप्पे सालाहका बलियो प्रतिद्वन्द्वी बन्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
बरू, जर्मनीमा खेलिरहेका लेवान्डोस्कीको लय वास्तवमै खतरनाक छ । यो सिजन उनले बायर्न म्युनिखका लागि ७ लिग गोल गरिसकेका छन् । उनले गत सिजन सर्वाधिक गोल गर्ने गर्ड मुलरको कीर्तिमानसमेत भंग गरे ।
हल्यान्ड पनि बुन्डेसलिगामै छन् । उनलाई लेवान्डोस्कीको उत्तराधिकारी मानिएको छ । किनभने हल्यान्डको फिनिसिङ कौशल लेवान्डोस्कीसँग तुलना गर्न मिल्ने खाले छ । बोरुसिया डर्टमन्डबाट यो सिजन यी २१ वर्षे स्ट्राइकरले पनि बुन्डेसलिगामा ७ गोल गरेका छन् ।
स्पेनको ला लिगामा खेलिरहेका भेट्रान फ्रेन्च फरवार्ड करिम बेन्जेमाले पनि यो सिजन गज्जबको लय देखाइरहेका छन् । ३३ वर्ष पुगिसकेका बेन्जेमाले ८ लिग खेलमा ९ गोल गरिसकेका छन् । उनी रियल म्याड्रिडका सबैभन्दा भरपर्दा गोलकर्ता हुन् । कैयौं वर्ष रोनाल्डोको छायाँमा परेका बेन्जेमा करियरको पाको उमेरमा पनि उस्तै ताजा देखिन्छन् ।
तर, यी सबै खेलाडीको दाबेदारीका बाबजुद पनि सालाह नै विश्वको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्ने दौडको अग्रपंक्तिमा छन् । सालाहको प्रदर्शनबाट बेलायतका अखबारहरू पनि फुर्किएका छन् । उनीहरूले सालाहलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी त घोषणा गरिसके नै । सालाहलाई किन ‘अन्डर रेट’ गरिएको भनेर पनि सोध्न भ्याइसके ।
लिभरपुल समर्थक त सालाह अनुबन्ध गरेको पहिलो दिनबाटै उत्साहित रहँदै आएका छन् । जर्सी बिक्रीमा सालाहलाई उछिन्ने अर्का लिभरपुल खेलाडी छैनन् । क्लब समर्थक सलाहलाई नै सबैभन्दा बढी खोज्छन् । सेल्फी र अटोग्राफका लागि नै किन नहोस् ।
एनफिल्डमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेका सालाहको लिभरपुल भविष्यप्रति केही दिनअघिदेखि चिन्ता बढेको छ । उनी र क्लबबीच सम्झौता नवीकरणमा सहमति जुट्न नसकिरहेको बताइएको छ । हुन त सालाहको लिभरपुलसँगको सम्झौता सकिन अझै १८ महिना बाँकी छ । लिभरपुल पुनः सालाहलाई नयाँ सम्झौतामा राजी गराएर ढुक्क रहन चाहन्छ ।
लिभरपुल समर्थक चाहन्छन्, सालाहले लिभरपुलबाटै करियर अन्त्य गरुन । सायद सालाह पनि यही चाहन्छन् । किनभने उनलाई थाहा छ, लिभरपुल समर्थक आफूलाई कति स्नेह गर्छन् भनेर । यद्यपि फुटबल व्यापार क्रुर हुन्छ । लिभरपुल र सालाहबीच नयाँ सम्झौताका लागि सहमति नजुट्न पनि सक्छ ।
तर सत्य के हो भने सालाह जति समय लिभरपुलमा रहन्छन्, उनीप्रति समर्थक नतमस्तक रहिरहने छन् । यो पनि हुनसक्छ, लिभरपुलमा रहँदा सालाह विश्व फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी साबित हुनेछन् ।